Wina Manje Lottery yase Ningizimu Africa | Amakhadi eWina Manje
Ikhaya / Imihlahlandlela / wina manje
Uthenga ikhadi le-Wina Manje bese ubona ukuthi ungazithola yini izimpawu ezifanayo ekhadini, okuzosho ukuthi uwine umklomelo wemali.
Udinga izimpawu ezintathu ezifanayo ukuwina umklomelo. Unezinsuku ezingu-365 zokufuna umklomelo wakho, uma ungaphumelela. Izimo zakho zokuwina ziyahlukahluka cishe phakathi kuka-48 no-55%
Ibiza malini uWina Manje?
Amathikithi abiza noma yini kusuka ku-R2 ngemidlalo engabizi kakhulu njenge-Fast Cash, Goldfish ne-Piggy Bank, kuze kufike ku-R10 ngemidlalo enenzuzo ethe xaxa njengeMoney Talk, neGolide kaFaro. I-Wina Manje yenzeka nini?
Wina Manje Scratch card imidlalo yamakhadi kuvalwa uma wonke amathikithi omdlalo othile esephumile emakethe. Ngokuvamile kunamathikithi azungeze isigidi esisodwa kuya kwezigidi ezinhlanu aphrintiwe ngomdlalo ngamunye.
Usuku lokuvala lomdlalo othile lushicilelwa kwabezindaba bendawo. Abadlali bangathumela namakhadi abo asetshenzisiwe embukisweni womdlalo weMina Manje ukuze babe sethubeni lokuwina imiklomelo eyengeziwe noma ukuvela kulo mdlalo.
Umdlalo Wina Manje Game Show
Ikhadi elikhulu likaWina Manje lokudonsa umdlalo walo mdlalo okhonjiswa eziteshini zakuleli zeSABC TV. Abadlali beWina Manje babonakala ngathi abakwazi ukuthola okwanele ngalo mbukiso womdlalo. Lolu hlelo lwasakazwa okokuqala ku-eTV ngo-2009 kodwa lwadlulela ku-SABC 1 kulo nyaka. Ungayibukela ngo-6: 30 ntambama ngoMsombuluko ebusuku.
IGidani yinkampani ephethe iSouth African National Lottery neWina Manje. UThembi Tulwana, okhulumela iGidani, uthe: “Amakhadi eWina Manje ayingxenye yemikhiqizo emine ngaphansi kweNational Lottery futhi anikela ngemiklomelo eqala ku-R2 kuze kufike ku-R500 000 futhi siyajabula ukumemezela ukuthi i-Wina Manje scratch card umdlalo wegeyimu ubuyile.” Uhlelo lokuqala lomdlalo we-Wina Manje oluzoqhutshwa ngo-2009 seluphelile, gada imithombo yezindaba yakuleli ukuthola ukuthi lolu hlelo olulandelayo luzosakazwa nini.
“ Ama-Wina Manje scratch card amayelana namathuba wokuwina ngokushesha futhi ahumusheka embukisweni womdlalo ozayo lapho udlala khona manje futhi uwina manje,” kusho uTulwana.